Vaovao - Ny fakana entana, fiakaran'ny vidiny ary ny baiko dia kasaina hatao amin'ny tapany voalohan'ny taona ho avy! Ny fahaiza-manao fanenoman-mofo 8-inch dia feno
Ny fakana entana, ny fiakaran'ny vidiny ary ny kaomandy dia kasaina hatao amin'ny tapany voalohan'ny taona ho avy! Ny fahaiza-manao fanenoman-mofo 8-inch dia feno
Noho ny fitomboana haingana amin'ny fangatahana fangatahana sary ho an'ny sensor CIS, chip PMIC fitantanana herinaratra, puce famantarana famantarana ny rantsan-tànana, chip Bluetooth, chip fahatsiarovana manokana, sns., Mafana ny baiko omana wafera 8-inch.
Araka ny voalazan'ny Securities Times, amin'ny alàlan'ny fanombohana miadana ny telefaona 5G, dia mitombo hatrany ny fangatahana fananganana fantsona key chip. Ireo orinasan-drindrina toy ny TSMC, Samsung, GF, UMC, ary SMIC dia manana fahaiza-manao feno ary lasa tsenan'ny mpivarotra.
Samsung dia mandinika fampiasam-bola mandeha ho azy ho an'ny tsipika famokarana 8-inch, manomboka amin'ny fitaterana an-tanana ka hatrany amin'ny fitaterana ny milina, ary antenaina handany mihoatra ny 100 miliara dolara amerikana.
Araka ny tatitry ny Securities Times, noho ny tsy fahampian'ny famokarana famokarana vy, dia nanambara ireo mpanamboatra endrika IC sasany fa nampiakatra ny vidin'ny sarimihetsika vaovao izy ireo ato ho ato ary nampandre ny mpanjifa mba hampiakatra ny vidin'ny famatrarana vy amin'ny telovolana fahaefatra amin'ity taona sy taona manaraka.
Raha ny kajikajin'ny Founder Securities, hatramin'ny volana septambra, ny fahaiza-manao fanenoman-mofo 8-inch dia tery, ary ny fe-potoana fandefasana fantsom-bary dia nitatra hatrany amin'ny 3 volana na mihoatra ny antsasaky ny taona aza. Antenaina fa hampiakatra ny vidin'ny fandrafetana baiko vaovao amin'ny telovolana fahefatra. Hiakatra 10%.
Raha ny loharanom-baovao voaray dia nisesy ny Shenzhen De Ruipu tamin'ny famoahana ny fampandrenesana ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra amin'ny 18 septambra, nanambara fa nanapa-kevitra ny hanitsy ny vidin'ny vokatra arak'izany ny orinasa manomboka ny 1 Oktobra 2020. Ny 8205 dia miankina amin'ny vidiny tany am-boalohany. . Ampitomboina 0,02 yuan.
Mpanamboatra fantsona MOS iray hafa, Shenzhen Jinyu Semiconductor, koa dia nandefa taratasy fifandraisana amin'ireo mpanjifa noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Manomboka amin'ny 1 Oktobra 2020, ny vidin'ny vokatra MOS fantsona sy ny andian-tsarimihetsika IC dia ahitsy araka izany amin'ny 20% -30%.
Ny mpandinika sasany dia nilaza fa ny antony ilana ny fivezivezena ankehitriny amin'ny alàlan'ny famokarana 8-inch dia ny fitomboan'ny fangatahana chips an-tsokosoko sy fitaovana elektrika, ary ny tahan'ny fitomboan'ny famatsiana dia mihemotra ao aorian'ny fitomboan'ny tinady, izay mahatonga ireo mpamokatra lehibe. mazoto manaparitaka vy.
Nilaza ny Industrial Securities fa ny tsy fahampian'ny chips amin'izao fotoana izao dia vokatry ny fikorontanana amin'ny rojom-bary. Ny marika finday sasany dia nampitombo ny fividianana puce tao anatin'ny telo volana lasa mba hiantohana ny filaminan'ny rojom-bidy. Vokatr'izany dia ambany dia ambany ny tahiry indostrialy ankehitriny.
Mandritra izany fotoana izany, Xiaomi, OPPO ary marika hafa dia manantena ny fanovana lehibe amin'ny fizarana finday amin'ny taona ho avy. Matoky kokoa ny fitomboan'ny fizarana izy ireo amin'ny taona ho avy. Mampitombo ny tanjon'ny tahiry ihany koa izy ireo. Tsy lavina fa misy toe-javatra mihoampampana. Noho izany, ny Securities Industrial dia manantena ny hitohizan'ny tsy fahampiana hatramin'ny tapany voalohan'ny taona ho avy. .